अभिनेता सुसान्तले आमा र आफ्नो तस्विर इन्स्टाग्राममा राख्दै लेखेका थिए: छोटो समयमै सकिने जीवन – Jagaran Nepal
अभिनेता सुसान्तले आमा र आफ्नो तस्विर इन्स्टाग्राममा राख्दै लेखेका थिए: छोटो समयमै सकिने जीवन
काठमाडौं । अभिनेता सुशान्तसिंह राजपुतको आ’त्मह’त्याको खबरले यतिबेला बलिउड शो’कमग्न छ। ३३ वर्षीय यी स्टार अभिनेताले बान्द्रास्थित आफ्नै घरमा आइतबार दिउँसो आ’त्मह’त्या गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्।
सुशान्तले जुनको पहिलो हप्ता दिवंगत आमा र आफ्नो तस्विर ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट बनाएर इन्स्टाग्राममा पोस्ट गरेका थिए जसमा लेखिएको स्टाटसमा उनले आमाबारे उल्लेख गरेका थिए। स्टाटसको एक पंक्तिमा उनले लेखेका छन्- छोटो समयमै सकिने जीवन। उनी अपार्टमेन्टको छैँटौँ तलामा झु’न्डिएको अवस्थामा भेटिएका थिए।
याे पनि पढ्नुहाेसः रहेनन् बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह, आफ्नै घरमा झु;ण्डिएको अवस्थामा श’व फेला
काठमाडौं । चर्चित बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतले आ’त्मह’त्या गरेका छन्। मुम्बईस्थित आफ्नै घरमा उनी झु’ण्डिएको अवस्थामा फेला परेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
बालाजी टेलिफिल्मसका टेलिचलचित्रहरूबाट लोकप्रियता हासिल गरेका राजपुतले ३४ वर्षको कलिलै उमेर संसार छाडेका हुन। उनी लामो समयदेखि डि’प्रेसनको औषधि सेवन गरिरहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । उनले एमएस धोनी, काइपे चे, केदारनाथलगायतका सिनेमाहरूमा अभिनय गरेका थिए।
याे पनि पढ्नुहाेसः अब उपत्यका प्रवेशमा कडाइ, उपत्यका छिर्न अब के गर्नुपर्छ ? हेर्नुहाेस
काठमाडौं, ३२ जेठ । नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या दिनहुँ ठूलो संख्यामा बढ्न थालेपछि सरकारले उपत्यका प्रवेशका कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ ।
अब उपत्यका प्रवेश गर्नका लागि आफू बसेको नगरपालिकाको अनुमति अनिवार्य रुपमा देखाउनु पर्ने निर्णय आज (आइतबार) गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकले गरेको छ ।
गृहको निर्णयअनुसार नगरपालिकाले प्रवेशका लागि अनुमति दिएपछि व्यक्तिले उक्त अनुमतिपत्रसहित आफू रहेको जिल्लाको प्रशासन कार्यालयमा सवारी पासका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ ।
त्यसपछि जिल्ला प्रशानसन कार्यालयले संक्रमण जोखिम विश्लेषण, यात्रा औचित्यतालाई पुष्टि गर्ने कागजात समेत विचार गरी पास दिन सक्ने गृहले निर्णय गरेको छ ।
काठमाडौं उपत्यका बाहिर जान चाहनेले अत्याश्यक काम खुल्ने कागजात पेश गरेमा तुरुन्तै सवारी पास दिने समेत गृह मन्त्रालले निर्णय गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
याे पनिः अभिनेता सुशान्त सिंहको निधनमा कुन कलाकारले कस्ताे प्रतिकृया दिए ?
काठमाडौं । चर्चित अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतको आ’त्मह’त्याको खबरले उनका प्रशंकहरुलाई निकै दुः’खी बनाएको छ। एक्लै बस्दै आएका सुशान्त सिंह राजपुत मुम्बई स्थित आफ्नै घरमा झु’ण्डिएको अवस्थामा फेला परेका हुन।
अभिनेता राजपुतको नि’ध’नले बलिउड क्षेत्रलाइृ ठूलो ध’क्का लागेको छ। सेलिब्रेटीहरुले राजपुतले आ’त्म’हत्या गरेको खबर सुन्दा स्त’ब्ध भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
अभिनेत्री मनिषा कोइरालालेल ट्विटरमा लेखेकी छिन्, ‘यो सुन्दा म निकै स्त’ब्ध भएँ.. बिभिन्न विषयमा उनले गर्ने बहस म निकै मन पराउँथेँ.. मेरो हार्दिक समवेदना! ओम शान्ति.,’
यस्तै, बलिउड अभिनेता अजय देवगनले सुशान्तको निधन निकै दुःखद रहेको बताएका छन्।
यस्तै, अभिनेता अक्षय कुमारले पनि आफू स्तब्ध भएको उल्लेख गरेका छन्।